एड्भेन्चर मोटरसाइकल किन्ने हो ? यस्तो छ ५ मोटरसाइकलको मूल्य र बिशेषता
काठमाडौं । नेपाली बजारमा पछिल्लो समय एड्भेन्चर मोटरसाइकलको उपलब्धता बढ्दै गएको छ । पछिल्लो समय केटीएमले मात्र दुई नयाँ एड्भेन्चर मोटरसाइकल नेपाल भित्र्याएको हो ।
केटीएम एड्भेन्चर २५०, एड्भेन्चर ३९०, रोयल इन्फिल्ड हिमालयन, बेनेली टीआरके २५० र बिएमडब्ल्यु जि ३१० जिएस नेपालमा उपलब्ध रहेको एड्भेन्चर मोटरसाइकल रहेको छन् । यी मध्य केटीएम एड्भेन्चर २५० नेपाली बजारमा नयाँ मोटरसाइकल रहेको छ भने अन्य मोटरसाइकल नपाली बजार परिचित मोटरसाइकल रहेको छ ।
यस अघि होन्डा, रोयल इन्फिल्ड, बीएमडब्ल्यु, बेनेली जस्ता कम्पनीले एड्भेन्चर मोटरसाइकल विक्री गर्दै आइरहेको छ । यसँसगै नेपालमा उपलब्ध उत्कृष्ट ५ एड्भेन्चर मोटरसाइकलको बारेमा आज हामि चर्चा गर्दै छाै ।
१. बेनेली टिआरके २५०
यसमा कम्पनीले २४९.२ सीसी क्षमताको सिंगल सिलिण्डर लिक्वीड कुल्ड, एफआई इन्जिन दिएको छ । उक्त इन्जिनले ९५०० आरपीएममा अधिकतम २५ पीएस पावर र ७५०० आरपीएममा २१ एनएम टर्क प्रदान गर्छ । यसमा ६ स्पीड गियरबक्स दिइएको छ ।
सुरक्षाको लागि दुबै चक्कामा डिस्क ब्रेक दिइएको यो मोटरसाइकलमा डबल च्यानल एबीएस उपलब्ध रहेको छ ।यसमा अपसाइड डाउन फर्क, ठूलो डिजिटल इन्ट्रुमेन्ट क्लष्टर, २०० एमएमको उच्च ग्राउन्ड क्लियरेन्स र १७ लिटर क्षमताको ठूलो इन्धन ट्याङ्की दिएको छ ।
केटिएम इन्टरनेशनल ट्रेडिङले यसलाई नेपाली बजारमा ६ लाख ३० हजार रुपैयाँ निर्धारण गरेर बिक्री गर्दै आएको छ ।
२. केटीएस एड्भेन्चर २५०
केटीएम २५० एड्भेञ्चरमा २४९ सीसी सिगंल सिलिन्डर, लिक्वीड कुल्ड इन्जिन रहेको छ । यो इन्जिनले ९००० आरपीएममा २९.६ पीएस पावर तथा ७००० हजार आरपीएममा २४ एनएम टर्क जनेरेट गर्छ । यसमा ६ स्पीडको गियरबक्स जडान गरिएको छ ।
कम्पनीले यसलाई ३९० एड्भेञ्चरबाट प्रेरित डिजाइनमा निर्माण गरेको छ । केटीएम २५० मा ३९० एड्भेन्चरबाट स्टील ट्रेल फ्रेम, ४३ एमएम डब्ल्यूपी एपेक्स इन्र्भटेड सस्पेन्सन, मोनोशक, ३२० एमएम फ्रन्ट र २३० एमएम रियर डिस्क, ह्वील, फ्यूल ट्याङक, अफरोड एबीएस जस्ता फिचर ३९० एड्भेन्चबाट लिएको छ ।
यसको मूल्य ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ रहेको छ ।
३. रोयल इन्फिल्ड हिमालयन
हिमालयनमा ४११ सीसी क्षमताको एयरकुल्ड एसओएचसी एफआई इन्जिन रहेको छ । ५ स्पीडको गियरबक्स रहेको यो इन्जिनले २४ पीएस पावर तथा ३२ एनएम टर्क जेनेरेट गर्छ ।
रोयल इन्फिल्ड हिमालयनको फ्रन्टमा ४१ एमएमको परम्परागत टेलिस्कोप फर्क र रियरमा मोनोसक रहेको छ । यसको फ्रन्टमा ३०० एमएमको डिस्क र रियरमा २४० एमएमको डिस्क ब्रेकका साथै डबल च्यानल एबीएस सुविधा पाउन सकिन्छ । रोयल इन्फिल्ड हिमालयनको बीएस ४ भर्सन नेपालमा हाल सोल्ड आउट भएको छ भने नयाँ मोटरसाइकल ल्याउने तयारीमा कम्पनी रहेको छ ।
यसको हालको मूल्य ८ लाख ९८ हजार रुपैयाँ रहेको थियो ।
४. केटीएम एड्भेन्चर ३९०
३९० एड्भेन्चर डाकर र्याली विजेता केटीएम ४५० ¥यालीबाट प्रेरित छ । ३९० एड्भेन्चरमा लाइटवेट ट्रलिस् फ्रेम चेसिस्, १७० एमएको डब्ल्यूपीको लङ्ग ट्राभल सस्पेन्शन रहेको छ । यसमा प्रिमियमको अनरोड तथा अफरोड दुवैमा सुहाउँदो मेटजेलरको नोबी टायर रहेको छ ।
त्यस्तै यसमा २०० एमएमको उच्च ग्राउन्ड क्लियरेन्स, लङ्ग व्हीलवेस, विस्तारित विन्डसिल्ड र इन्जिनको लागि सुरक्षित बेस प्लेट छ ।
यसमा सुपर बाइकहरुमा हुने फिचरहरु जस्तै, ट्राक्याक्सन कन्ट्रोल, कर्नेरिङ एबीएस, क्वीकशिफ्टर रहेको छ । साथै, टर्न-बाइ-टर्न न्याभिगेशनको लागि स्मार्टफोन कनेक्टीभिटी र फूल-कलर टीएफटी डिस्प्लेको प्रयोगले यसलाई प्रिमियम बनाएको छ ।
यस मोटरसाइकलमा ३७३ सीसी अत्याधुनिक डिओएचसी सिंगल सिलिन्डर, इएफआई इन्जिन रहेको छ । यसमा रहेको राइड बाई वायर जस्ता ईलेक्ट्रोनिक्सले ४३ बीएच पावर तथा ३७ एनएम टर्क जेनेरेट गर्छ ।
३९० एड्भेञ्चरको मूल्य ९ लाख ९९ हजार ९०० रुपैयाँ रहेको छ ।
५. बिएमडब्ल्यु जि ३१० जिएस
डभेन्चर टुरर बाइक बीएमडब्ल्यू जी-३१० जीएसमा ३१३ सीसी, सिङ्गल सिलिन्डर, लिक्विड-कूल, फ्यूल इन्जेक्सन इञ्जिनले ३४ बीएच पावर र २८ एनएम–टर्क जेनेरेट गर्छ । यस मोटरसाइकलमा सिक्स-स्पीड गियरबक्स जडान गरिएको छ । उक्त एड्भेञ्चर मोडलले राम्रो पफर्मेन्ससमेत देखाइरहेको छ । जी-३१० जीएसको अधिकतम् स्पीड क्षमता १४३ किलोमिटर प्रतिघन्टा रहेको छ ।
जी-३१० जीएसमा फोर–पिस्टन क्यालिपर–३०० एमएम फ्रन्ट–डिस्कब्रेक र पछाडि सिङ्गल पिस्टन क्यालिपर–२४० एमएम डिस्कब्रेक रहेको छ । कम्पनीले यसमा ड्यूल च्यानल एबीएस सिस्टमसहितको स्ट्यान्डर्ड प्याकेज दिएको छ । जी-३१० जीएसको अगाडि भागमा ४१ एमएम अपसाइड डाउन-फर्क दिइएको छ भने पछाडि भागमा १८० एमएम प्रि-लोडेड एड्जस्टेवल मोनोशक राखिएको छ ।
रातो र कालो रंगको बिएमडब्ल्यू जी-३१० जीएसको मूल्य १० लाख ९० हजार रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । सेतो रंगमा उपलब्ध सोही मोडलको मूल्य ११ लाख १५ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ ।
रितेश र प्रीतिको किस, जेनेलियाको रिस बलिउडमा भाइरल…
बाघको छालासहित चारजना पक्राउ
Categories Select Category Auto (1,276) Blog (3) English (1,494) Entertainment (1,261) Finance (2,960) Nepali (29,909) Sports (18,757) Tech (5,251) World (8,021)